दुवइ (UAE) बाट आयो ३ करोड नेपालीहरुको लागि खुसिको खवर । अमर बम लाई छुटाइन राष्ट्पतिले । १४ बर्ष देखि फाँसीको पालो कुरेर बसेका अमर बम लाइ कुनै नेताले गर्न न सकेको काम राष्टपति भण्डारीले गरेर देखाइन . - Enepalese.com
दुवइ (UAE) बाट आयो ३ करोड नेपालीहरुको लागि खुसिको खवर । अमर बम लाई छुटाइन राष्ट्पतिले । १४ बर्ष देखि फाँसीको पालो कुरेर बसेका अमर बम लाइ कुनै नेताले गर्न न सकेको काम राष्टपति भण्डारीले गरेर देखाइन .
इनेप्लिज २०७४ कार्तिक ३० गते १५:०७ मा प्रकाशित
दुवइ (UAE) बाट आयो ३ करोड नेपालीहरुको लागि खुसिको खवर । अमर बम लाई छुटाइन राष्ट्पतिले । १४ बर्ष देखि फाँसीको पालो कुरेर बसेका अमर बम लाइ कुनै नेताले गर्न न सकेको काम राष्टपति भण्डारीले गरेर देखाइन .. हामि सबै नेपाली हरुको सलुट छ हजुरलाई … सक्दो शेयर गरि सम्मान गरौ .. भिडियो सहित !!
दुबई भ्रमणमा रहनु भएकी नेपालकी राष्टपतिको आग्रह पछि दार्चुलाका अमर बहादुर बम रिहाई हुने भएका छन् । उनको रिहाईले नेपालीहरुको १४ बर्षे लडाईको जित हुने छ । यो अभियानको सूरुवात मैले गरेको थिए । अमरका पिता,माता र पत्नि धनिसा बमलाई ठूलो शान्ती मिल्ने छ । अमरका बारेमा जानेकाहरुले राष्टपति भण्डारी प्रति ऋणि हुने छन् । एक नेपाली जो निर्दोष भएर पनि भारतियको षडयन्त्रका कारण ज्यानमाराको अभियोगमा फाँसीको पालो कुरेर बसेका थिए । उनको रिहाइले मलाई अत्यन्तै खुशि तुल्याएको छ जस्का लागि दार्चुलाका मित्र राजेन्द्र कुँवरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।